यौन सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलामा हुन्छ यस्ता परिवर्तन... | Hamro Doctor News
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यता पुगेको डा. शेरचनको दावी
सेक्स कुनै पनि सम्बन्धको लागि ठूलो परिवर्तन लिएर आउँछ । इमोशन्सको साथै कपलकाबीच बन्डिंगलाई पनि विभिन्न तरिकाले प्रभावित पार्छ । तर, कुरा यतिमा मात्र सिमित हुँदैन । यौन सम्बन्ध सुरु गरिसकेपछि पुरुषमा भन्दा महिलामा यसको विभिन्न परिवर्तन हुन जान्छ ।
जानौं यौन सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलामा हुने केही परिवर्तनका बारेमा...
सेक्सपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको शरीरमा मस्तिष्क बढि अक्सीटसिन र डोपामाइन हर्मोन फाल्ने काम गर्छ । जसको प्रभाव उनको इमोशन्सको साथै व्यवहारमा पनि पर्न जान्छ । यो असर केहि समयका लागि मात्रै होइन विस्तारै सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा नै पर्न जान्छ ।
यौन सम्बन्धको सुरुवातले महिलालाई आफ्नो शरीरलाई लिएर कन्फिडेन्सलाई पनि बढाउने काम गर्छ । तर, जब पार्टनरले तपाईंको शरीरको हर अंगलाई माया गर्छ भने कन्फिडेन्स बढ्नु स्वभाविक पनि हो ।
ब्रेस्ट फर्म हुनु
सेक्सको क्रममा र त्यसपछि स्तन बढेको अनुभव हुन्छ । यस्नो यस कारण हुन्छ, किनकी यौन सम्बन्धको क्रममा नर्भस सिस्टमले पनि प्रतिक्रिया दिन्छ र स्तन ठूलो हुन जान्छ । तर, यसको मतलव यो होइन की यो फर्मनेस सँधै रहिरहन्छ । शरीर रिल्याक्स हुनासाथ यो सामान्य बनेर जान्छ ।
स्तनको आकार बढ्छ
यौन सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलाको स्तनको आकार पनि बढ्न थाल्छ । हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण यस्तो हुने गर्छ । उसो यो सबैको साथ एक समान होस् भन्ने जरुरी हुँदैन ।
सेक्शुअल ऐक्टिभिटीको सुरुवात र पछि महिलाले आफ्नो भजाइनामा परिवर्तन महसुस गर्छिन् । इन्टरकोर्सको क्रममा बडी रियाक्शनको कारणले हुने गर्छ । त्यसै कारणले समय सँग सँगै भजाइनाको आकार पनि ठूलो हुँदैछ ।
क्लिटरिस र यूटेरस
यौन सम्बन्ध सुरु भएपछि महिलाको पाठेघर र क्लिटरिसको रियाक्शनमा पनि परिवर्तन आउँछ । इन्टरकोर्सबाट उत्तेजित हुनाले यी अंग सुन्निने हुन्छ । जसलाई मस्तिष्कले याद राख्छ र सेक्शुअल एक्साइटमेन्टको स्थितिमा प्रत्येक पटक यसरी नै प्रतिक्रिया दिन्छ ।
भावनात्मक रुपमा सेन्सेटिभ
कपलको बीच यौन सम्बन्धको सुरुवात हुनाले उनलाई एक नयाँ मोडमा लिएर जान्छ । यसको असर विशेष गरि महिलामा पर्न जान्छ । किनकी महिलाका लागि सेक्स एक अलग नै महत्वको हुन्छ । जस कारण सेक्स लाईफ महिलामा सुरु भएपछि उनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई लिएर निकै नै भावनात्मक रुपले सेन्सेटिभ हुने गर्छिन् ।
(जर्नल अफ सेक्सले गरेको अध्ययन अुनसार)
Last modified on 2019-04-20 14:51:58
दिल्ली, ७ भदौ । पतञ्जली आयुर्वेदका कार्यकारी निर्देशक आचार्य बालकृष्ण अस्पताल भर्ना...
काठमाडौं, ६ भदौ । डा. सुरेन्द्र शेरचनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि आफ्नो...
हैजा विरुद्ध पनि आयो खोप ! बाँकेका २७ हजार जनालाई खुवाइँदै
हजारौैं प्रदर्शनकारीलाई डा. केसीले फोनबाट के भने ?